Etu esi etinye akwụkwọ maka akwụkwọ Ikikere Illinois Hemp?
Otu esi etinye akwụkwọ maka ikikere Hemp na Illinois
Na Eprel 30, 2019 - Illinois wepụtara mpempe akwụkwọ hemp ya. You nwere ike ịchọta ngwa hemp nke ụlọ ọrụ Illinois gị na njikọ dị n'okpuru. Obi dị anyị ụtọ inyere gị aka ịchọta ngwa ngwa.
Pịa Iji malite Illinois Hemp Ngwa.
Illinois mere ngwa ahịa hemp ngwa ọrụ dị mfe ịnyagharịa, mana usoro niile site na ngwa na mkpụrụ ruo ire bụ otu anyị si enyere ndị ahịa aka chọrọ ịgbatị arụmọrụ hemp ha na Illinois, nwere onwe gị ịnye anyị oku iji kparịta ebumnuche azụmahịa nke ụlọ ọrụ gị CBD ma ọ bụ hemp ulo oru.
Industrial Hemp na Illinois Open maka 2019
Ọ bụghị nanị na Illinois hemp iwu ka agafere, kamakwa Edere iwu ndị ahụ, nke pụtara na ọ bụ na njikere maka oge izizi ya.
Oge okwu ihu ọha maka iwu ọhụrụ dị na Hemp gwụsịrị na February 11, 2019, dịka mbipụta ọhụụ nke Ngalaba Ọrụ Ugbo si kwuo. Ọfụma na-emekarị mbipụta. Edechara iwu a na ngwa hemp Industrial maka ikikere ịzụlite ma ọ bụ idebanye aha ya iji dozie hemp ahụ ụbọchị ọ bụla ugbu a.
Illinois ' Mmegharị Hemp Act na-abanye n’ọrụ n’afọ iku ala n’afọ 2019. Ọ bụ ezie na ndị malitere n'oge gara aga nwere ike ị nweta ụfọdụ uru, n'ọtụtụ afọ hemp nwere ike ịghọ ebe a na-ahụkarị ya na ọka na soybe na ala ahịhịa nke steeti.
Hemp bụ afọ - ifuru nke CBD dị ka ifuru THC
Nkowaputa nke ulo oru Hemp
Nkebi nke 5 nke Mmezu Hemp Act kọwaa Industrial Hemp dị ka:
“Hemp Industrial” pụtara osisi Cannabis sativa L. na akụkụ ọ bụla nke ihe ọkụkụ ahụ, ma ọ na-eto ma ọ bụ na ọ bụghị, na mkpokọta ttahydrocannabinol delta-9 adịghị ihe karịrị pasent 0.3 na akọrọ dị ala nke azụlitere n'okpuru ikikere enyere n'okpuru Iwu a ma ọ bụ na ọ dị n'ụzọ iwu dị na Steeti a, ma tinye ngwaahịa etiti ma ọ bụ nke emechara ọ bụla emere ma ọ bụ site na hemp nke ulo ọrụ.
Ka anyị tulee ihe nke ahụ pụtara.
cannabis sativa bụ hemp, kamakwa…
na cannabis sativa enweghị ihe karịrị 0.3 pasent akọrọ arọ nke THC, na
akọlitewo ya n'okpuru ikikere, ma ọ bụ n'ụzọ iwu kwadoro na steeti Illinois, na
ihe ọ bụla ọzọ emere ma ọ bụ nweta hemp
Ọ nwere ihe anọ ahụ?
Iwu a gụnyere iwu ndị a:
Onweghi onye nwere ike ito hemp na enweghi ikike
Onweghi onye nwere ike ijikwa hemp n’enweghị ikikere
A ga-enyocharịrị mkpụrụ niile, clones na transplants n'okpuru AOSCA.
opekempe oghere nke otu ụzọ n’ụzọ anọ nke acre maka n’èzí na 500 sq.ft. maka ime ụlọ na-eto
A ga-etinyerịrị akwụkwọ anamachọcha maka steeti ahụ tupu etolite
N'oge na-adịbeghị anya, steeti Illinois weputara ngwa ya maka hemp - ha bụ ndị a:
Aha na adresị nke onye anamachọihe
Ofdị azụmahịa ma ọ bụ nzukọ, dị ka ụlọ ọrụ, LLC,
mmekorita, ihe ndi ozo, wdg;
Aha azụmahịa na adresị, ma ọ bụrụ na ọ dị iche na nke ndị osụk abata
azịza nye mpaghara (a) (1);
Nkọwa iwu gbasara mpaghara ala, gụnyere Global Positioning
Onye na - ahazi sistemu nke usoro iji wee mee ihe hemp ulo oru;
Maapụ mpaghara ala ebe onye na-achọ ọrụ chọrọ iji wuo ụlọ ọrụ mmepụta ihe
hemp, na-egosi ókè na akụkụ nke mpaghara na-eto eto na
acres ma ọ bụ ụkwụ ukwu;
Ederede iji gosipụta ala ahụ bụ ugbo dị ka akọwara na Nkebi nke 1-60
nke Koodu Ngwongwo Ngwongwo; na
Ego ọdabara nke $ 1,100.
otu esi enweta ikikere hemp na-eto eto na onyonyo?
Ọ bụrụ na azụmahịa canna gị chọrọ enyemaka na Helọ Ọrụ Hemp ikike ha, biko kpọọ anyị ọka iwu cannabis.
Ma ọ bụ mezue nkata bot nke ha mepụtara na weebụsaịtị a. Anyi ga-abanye!
Di iche iche di na Cannabis Space Illinois Women na Cannabis bu ndi eweputara na ijiko, muta ihe, na ikwado ndi iche na ulo oru cannabis. Dabere na MJBizDaily, 37% nke ọkwa dị elu na azụmaahịa cannabis bụ ụmụ nwanyị nwere…
Ingzụlite azụmaahịa cannabis na-ebuwanye ibu na-eme ka azụmaahịa gị dị ka ịmalite azụmahịa azụmahịa cannabis gị. Ma ị na-azụ ahịa ancillary ma ọ bụ azụmaahịa nke “metụrụ osisi ahụ”, na-achọpụta mgbe ị ga-etolite bọọdụ na onye ị ga-ewe…
Hemp Uto ma ọ bụ Nhazi
Illinois 'Industrial Hemp Act chọrọ ikike maka ma ịkụ azụ (ya na-eto) hemp, ma ọ bụ nhazi (n'ichepụta) hemp.
Tivationzụ Hemp n'okpuru Iwu Illinois.
Nkebi nke 10 nke Industriallọ Ọrụ Mmegharị Ahụ Ahụ Illinois na-enye ihe achọrọ maka ngwa iji nweta ikike chọrọ N'ụzọ bụ isi, ọ bụ naanị ihe atọ ka achọrọ n'okpuru Nkebi 10 (b) nke iwu. ọ na-ewepụta ụzọ atọ:
(1) aha na adres nke onye anamachọ ihe;
(2) nkọwa iwu nke mpaghara ala, gụnyere ndị na - ahazi sistemụ Global Positioning System, ka etinyere iji zụlite hemp; na
(3) ma ọ bụrụ na iwu gọọmentị chọrọ nyocha nzube maka ịkụ azụ hemp nke mmepụta, nkọwa nke otu ma ọ bụ karịa ebumnuche nyocha emere maka ịkwalite hemp nke mmepụta nke nwere ike ịgụta ọmụmụ nke uto, ịkụ, ma ọ bụ ahia nke hemp nke ụlọ ọrụ; agbanyeghị, ihe emere nyocha achọrọ agaghị enwe ike igbochi azụmaahịa nke hemp nke ngwa ọrụ.
Ọzọkwa, Iwu Hemp nke Illinois gara n'ihu na-achọ usoro ndị ọzọ site n'aka ndị ọrụ ubi Hemp. Ha ga:
nwere nyocha otu afọ kwa afọ
nnwale maka ịgaghị ọnụego THC achọrọ
Iwu nke Ngalaba Ugbo nke Illinois setịpụrụ maka ụgwọ, akara na ụdị.
Ikikere Illinois Hemp
Nhazi nke Hemp Industrial
N'adịghị ka ndị na-azụ hemp, ndị na-eme hemp anaghị achọ ikikere - kama ọ bụ naanị ndebanye aha.
Nkebi nke 10 (b-5) na-enye nke a:
Mmadu agagh i hazie hemp ulo oru na steeti a n’ebighi edebanye aha ya na Ngalaba edebere ya.
N'ụzọ akụrụngwa, mgbe ị nwesịrị ịbawanye ụkwụ n'ụzọ iwu - ma ọ sitere na Illinois ma ọ bụ na ọ bụghị - ị nwere ike ịmalite nhazi nke hemp ahụ n'ọtụtụ ihe bara uru - mana naanị mgbe ị nwetasịrị aha gị na steeti.
Mmechi nke Mmegharị Hemp ma ọ bụ Nhazi
Yabụ na ọ bụ ezie na ọ na-egosi na ọ bụ naanị ndị na-azụ hemp chọrọ ikikere, ndị na-ewepụta hemp n'ime ngwaahịa dị ka CBD na-etinye uche ha ka kwesịrị ịdebanye aha ha.
Ọ bụrụ na azụmahịa canna gị chọrọ enyemaka na Helọ Ọrụ Hemp ikike ha, biko kpọọ anyị ọka iwu cannabis na (309) 740-4033.
Dị ka mmelite kachasị ọhụrụ na ibe a na February 22, 2019, Ngalaba Nchịkwa nke Illinois amalitebeghị itinye ngwa. Kpọọ anyị ugbu a iji jide n'aka na mgbe oge ruru - azụmahịa gị nwere ike ịnweta ikikere ya maka hemp nke mmepụta.